अभियान पोष्ट – Truly A Digital News Paper in Nepal.
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका पुराना नेता हुन मोहन वैद्य किरण । कम्युनिष्ट आन्दोलनका धेरै उतार–चढाव उनले नजिकबाट देखेका छन् । लामोसमय प्रचण्ड र बाबुरामसँगै एउटै पार्टीमा बसेर काम गरेका मोहन वैद्य किरणले अहिले क्रान्तिकारी माओवादीको महासचिव छन् । झन्डै पाँच दशकदेखि कम्युनिष्ट राजनीति गरिरहेका मोहन वैद्यले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखेका मोडहरु :
मोहन वैद्य "क.किरण"
मंकीपक्सको संक्रमणको लक्षण ५ देखि २१ दिनसम्ममा देखिने गर्दछ। सुरुको अवस्थामा यसको लाक्षण अन्य संक्रामक रोगहरुसँग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ। ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु र जिउ दुख्नु, ढाड दुख्नु, मांशपेशी दुख्नु, शरीर कमजोर हुनु यसका यसका प्रारम्भिक लक्षण हुन।
के हाे मंकीपक्स ?
छोटो समयमा आफ्नो सिपलाई प्रयोग गरी रोजगारी मिल्ने भएकाले आफुहरुले यो हस्पीटालिटी सेन्टरलाई रोजेको यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अनुभव साट्छन् ।
एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोले परमाणुअस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। सीएनएन टेलिभिजनलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा